सुशान्तलाई स'म्झिएर फोटो हे'र्दै रु'न्छ फु'ग्गी ! - Filmy News Portal Of Nepal
सुशान्तलाई स’म्झिएर फोटो हे’र्दै रु’न्छ फु’ग्गी !
संसारमा सबै भन्दा स’र्वश्रेष्ठ प्रा’णी मानिस हुन् । तर, कतिपय मानिस भन्दा स’र्वश्रेष्ठ प’शु कु’कुरलाई पनि मानिन्छ । त्यसैले त कु’कुरमा पनि मानिसमा जस्तो चे’तना हुन्छ भनेर धेरै उदाहरणहरु सुनेकै छौं । को’मामा गएको मा’लिकलाई बाहिर रु’गेर ब’सेको पनि समाचारमा पढेको छौं ।
अहिले फेरि एउटा त्यस्तै हृ’दयवि’दारक फोटो बाहिर आएको छ । जस्मा आइतबार प्रा’ण त्या’गेका सुशान्त सिंह राजपुतको कु’कुर फु’ग्गी निकै भा’वुक बनेको छ । सुशान्तले फु’ग्गीलाई धेरै माया गर्थे । उनले फु’ग्गीसँगै खे’लेका र र’माएका धेरै तस्विरहरु शेयर ग’रिरहन्थे ।
उस्को अ’वस्था ना’जुक भएपछि सुसान्तको म्यानेजरले डाक्टरलाई बो’लाएको थिए । कु’कुरले खान पानी समेत न’खाएर सुशान्तको फोटो हे’रेर ब’सिरहेको छ । डाक्टरले सुशान्तको मृ’त्यु स’हन न’सकेर कु’कुरले पनि सु साईड गर्न खो’जेको भारतीय मिडियाले दा’बीका साथ लेखेका छन् ।
भारतीय मिडियामा झु’टा समाचारहरु नि’कै आउने गर्छ । तर, पनि यो तस्विरमा भने सुशान्तको कु’कुर चिन्तामा रहेको चाँहि दे’ख्न सकिन्छ । – एजेन्सी